SMS kaabta Android: Best 3 SMS Apps kaabta u Android
1. kaabta Android Data
1.1 SMS kaabta
1.2 Xiriirada kaabta
1.3 kaabta Photos
2. kaabta Android inay PC
3. kaabta & Soo Celinta Android
4. ROM ee kaabta / firmware
Haddii aad inta badan waxay leeyihiin telefoonka ah Android iyo qoraalka, waxaa jira fursad aad u badan oo ah fariimaha gaagaaban oo muhiim ah oo qiimo badan in aad marnaba dooneynin inuu u lumin. Ama waxaad uun doorato in aadan tirtirto fariimaha aad, oo doonaya in ay SMS Android gurmad ah rikoodhada iyo maal urursada mustaqbalka. Waa darn u fudud in ay gurmad SMS on Android, inta aad barbaro caawinaad ka qalab-saddexaad. In this article, waxaan doonayaa inaan idin tusin Best kaabta SMS Apps.
Qeybta 1: kaabta fariimaha qoraalka ee Android ka Computer ee 1 Click Qeybta 2: Ma kaabta SMS ah ee Android 2 Free Apps
Qeybta 1: kaabta fariimaha qoraalka ee Android ka Computer ee 1 Click
An dhan-in-mid gurmad Android iyo soo kabashada codsiga kombiyuutarka aad u!
1 click in fariimaha qoraalka ah gurmad ka Android inay PC, iyo soo celiyo waqti kasta.
Xulo fariimaha gurmad in computer iyo badbaadiyey sida file XML / TXT ah.
Si toos ah qoraal ama mid badan oo saaxiibo ka computer fudayd.
View fariimaha qoraalka ah oo dhan ee threads.
Gacanta ka taleefan oo u jawaabi fariin marka aad mashquul tahay.
Delete fariimaha qoraalka ah ee Dufcaddii oo bilaash ah ilaa xasuusta telefoonka.
Tallaabada 1 Connect Your Android Phone in Computer
Si aan ku bilaabo, download hore ka dibna codsiga this on your computer. Ka dib markii la rakibey, waxaad bilaabi kartaa. Markaas, xirmaan telefoonka aad Android inay computer la cable USB ah. MobileGo goobtii lagu ogaan doonaa telefoonka aad Android oo muujiya xogta ay furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Marka la isticmaalayo version Windows ah, xataa aad ku xidhan karto telefoonka aad Android via WiFi. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la rakibo app MobileGo ee gacanta.
Tallaabada 2. Messages Xulo kaabta on Android
Riix SMS tab inuu soo galo suuqa kala maamulka SMS ah. Dooranaysaa fariimaha iyo riix Import / Dhoofinta button. Dooro dhoofinta dhan SMS si computer ama dhoofinta xulay SMS si computer , iyo badbaadin fariimo ah in aad damisid qaab .txt ama .xml.
Tallaabada 3. kaabta All Messages ka Android
In uu furmo suuqa hoose, u tag kaabta One-Click. By default, dhammaan waxyaabaha aad awoodo gurmad waxaa lagu saxay. Waxa ay fariimaha qoraalka ah, xiriirada, app, xogta app, music, video, sawiro, jadwalka iyo Guda yeedha.
Gurmad oo dhan oo iyaga ka mid mar Waxaad awoodi kartaa. Haddii aad rabto in aad raad raac qoraalka ee Android, fadlan uncheck ka kooban kale. Ka dib markii in, guji Back Up . Markaas, file gurmad badbaadi doona on your computer. Mar kasta oo aad rabto, waxaad soo celin karaa qoraallada iyo kuwa kale oo ka soo file gurmad ah.
Qeybta 2: Ma kaabta SMS ah ee Android 2 Free Apps
Kaabta SMS & Soo Celinta
Kaabta SMS +
1. Waa maxay ee kaabta SMS & Soo Celinta
Sida ay magaceeda soo jeedisay, kaabta SMS & Soo Celinta waa app fudud Android loo isticmaalaa in lagu fariimaha qoraalka ah Android gurmad in kaarka SD ah. Ama haddii aad rabto, xitaa gali kartaa raad raac si aad email, Google Drive iyo DropBox. Waxaa taageeray ilaa fariimaha SMS qaab XML oo u ogolaanaya in ay file SMS gurmad u gudbin ka mid phone in kale. Marka sanduuqa SMS aad ka buuxa, waxaad u isticmaali kartaa in ay tirtirto kuwa aad la rabin.
Download kaabta SMS & Soo Celinta ka Google Play >>
2. Sida loo isticmaalo ee kaabta SMS & Soo Celinta
Tallaabada 1. Tag Google Play in ay soo baxdo iyo rakibi kaabta SMS & Soo Celinta telefoonka aad Android.
Tallaabada 2. Tubada app iyo dooran kaabta in gurmad SMS in kaarka SD ee telefoonka aad Android.
1. Waa maxay ee SMS kaabta +
Kaabta SMS + shaqaysaa si ka duwan. App Tani waxay ka caawisaa lacag la'aan ah gurmad SMS, abuse call iyo xitaa MMS in aad xisaabta Gmail. Sidaas darteed, haddii ay kugu adag tahay in MMS gurmad o Android, kaabta SMS + doorasho wanaagsan. Marka aad u baahan tahay, waxaad soo celin karo SMS iyo dib ugu yeedhaan in aad telefoon abuse. Si aad u isticmaasho app bilaash ah, waxaad u baahan tahay in ay awood u IMAP ee Gmail.
Download kaabta SMS + ka Google Play >>
2. Sida loo isticmaalo ee kaabta SMS +
Tallaabada 1. Open ah browser iyo calaamad in aad xisaabta Gmail, ka dibna dalka aad page Gmail.
Tallaabada 2. Riix icon marsho ku dhankiisii ​​midig iyo sare. In menu hoos-hoos, doorato Settings . Riix gudbinta iyo POP / IMAP .
Tallaabada 3. Tag IMAP qaybta Access, dooran sahlo IMAP . Markaas, guji Save Changes s.
Tallaabada 4. Tag Google Play iyo rakibi SMS Back + telefoonka aad Android.
Tallaabada 5. Tubada kaabta SMS + saabsan telefoonka, oo guji kaabta si SMS Android gurmad, MMS oo abuse wac si aad Gmail xisaabta.
Content Nuqul ka iPhone in Android
Android ka Bedelka Content si iPhone
Hel Lugood u Android si ay u gudbiyaan Content
Xiriirada Transfer in Android Phone / Tablet
Dhammaan Waxyaabaha ku saabsan Manager Device Android
Maamul All Pictures on Android Phone
Top 3 Lugood Alternative for Android
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Photon 4G
> Resource > Android > SMS kaabta Android: Apps kaabta SMS Best u Android